I-White Sands Estate Villa 17.
Zicabange uhlezi emuva edekhini ubheke isihlabathi esihle esimhlophe sase-Tasmania's East Coast kanye ne-Tasman Sea 'nobhiya wase-Ironehouse' noma 'iwayini le-WhiteSands Estate'. Kuzwakala kuphelele? I-villa yethu ephethwe ngasese ingaphakathi kwe-White Sands Estate ebabazekayo. Ungafinyelela indawo yokungcebeleka njengemininingwane engezansi.
Ibekwe kahle 30min drive Sth to Bicheno, another 30 to beautiful Wineglass Bay, noma 30min Nth Nth to St Helens and to the Bay of Fires. Imizuzu engu-20 ukuya esuphamakethe.
Ukufinyelela ogwini oluseMpumalanga yeTasmania okuhamba phambili okunikezwayo. Noma ngabe ujabulela konke okuqukethwe kule ndawo yokungcebeleka noma ukuhlola izikhungo eziningi zezivakashi nasemathrekhi ashayiwe angakapheli amahora okugibela izimoto, kuzoba khona okuthile okufanele wonke umndeni.
I-villa iyindawo emaphakathi iningi logu olumangalisayo lwase-East. Ukuhamba kahle nokuhlanzekile, amabhishi adumile emhlabeni angaphakathi kwamabanga alula okushayela. Ukuhamba ngemizuzu engama-30 ukuya enyakatho noma eningizimu kuzokuyisa ezindaweni zezitolo ezijwayelekile. Qiniseka ukuthi uletha igilosa embalwa ukuze uqalise njengoba isuphamakethe eseduze iyimizuzu engama-20 uma ushayela uye enyakatho.
Ngokuvamile ucingo lungekho. I-villa yangasese ayihlinzekwa ngabaphathi bezindlu.